Ukutya iintlanzi | Ngeentlanzi
Ukutyisa iintlanzi kubaluleke kakhulu kuba ukuba asilumkanga kunokubangela ukufa kwezilwanyana ngenxa yokutya okugqithileyo. Kuya kufuneka sazi ukuba ezi zilwanyana zinomkhwa wokutya lonke ixesha zisenziwa ukutya, ke abanakuzibamba ekusetyenzisweni kokutya, ke sinokumbulala ngokuqinisekileyo.
Kule ndawo Uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze wazi iinkcukacha ezinje ngeeshedyuli esinokuthi sizisebenzise xa sibondla, xa kuvalwa ukukhanya okanye ezinye izinto ezibaluleke kakhulu kubukho bayo. Ukongeza kwiindidi zokutya okanye ezinye iingcebiso ekufuneka sizithathele ingqalelo.
Intlanzi bondla ngokunxulumene nohlobo lwemvelaphi, Ukuba zitshisa, ukuba ngamanzi abandayo njl.
I-Aquaponics yinkqubo edibanisa iimpawu zenkcubeko yentlanzi kwindlela yesiqhelo ye-aquaculture kunye ...
Kungenzeka ukuba unayo i-aquarium kwaye awuqinisekanga ngento yokondla iintlanzi zakho. Kukho amawaka e ...
Ukuba unayo itanki yentlanzi, usenokucinga ngokuthenga isixhobo sokuhambisa iintlanzi ulibale ngaso ...
Okwangoku, zininzi izilwanyana zasekhaya esinokuzifumana njengokhetho lokuba ngamaqabane obomi kwaye ...
Ukutya okuphilayo kweentlanzi
Impilo echanekileyo yentlanzi kukutya okufanelekileyo. Namhlanje sinezixhobo ezininzi ...
por Encarni yenzayo 10 iminyaka .
Xa sisiya eholideyini, umzekelo ngoku ngebhulorho okanye umsele wamanzi okhoyo eSpain kwaye uvumela ...
Iintlanzi zizilwanyana ezingakuceliyo ukutya kwaye, ukuba awukhangeli kwi-aquarium, emva kokuyiqhela ...